खुशीको खबरः डा. भगवान कोइरालाले बच्चाको अस्पताल खोल्दै - Everest Dainik - News from Nepal
खुशीको खबरः डा. भगवान कोइरालाले बच्चाको अस्पताल खोल्दै
काठमाडौं, साउन ५ । डा. भगवान कोइराला वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ (हार्ट सर्जन) हुन्। नेपालमा मुटुरोगको उपचारको क्षेत्रमा डा. कोइरालाले उल्लेख्य योगदान गरेका छन्। चिकित्सकीय अभ्यासका क्रममा उनले हजारौं मुटुरोगीलाई नयाँ जीवन दिएका छन्।
सहिद गंगालाल अस्पताललाई उचाइमा पुर्‍याउने उनको विशेष भूमिका छ। मुटुरोगको कुरा आउँदा डा कोइरालाको नाम पनि सँगै जोडिएर आउँछ। तर पछिल्लो समय डा कोइराला बाल अस्पताल खोल्ने अभियानमा जोडिएका छन्।
मुटुरोगका विशेषज्ञ डाक्टर भएर बालरोगको उपचार हुने अस्पताल किन?
डा कोइरालाका अनुसार पछिल्लो समय उनले सबैभन्दा बढी सुनेको प्रश्न नै यही हो। भन्छन्, ‘बालबालिकाको उपचारका क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो रहर अहिलेदेखिको होइन। डाक्टरका रुपमा सेवा सुरु गरेदेखि नै म बालबालिकाको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्न चाहन्थें।’
बालबालिकाको स्वास्थ्यमा काम गर्ने भनेर नै आफू २१ वर्षअघि अमेरिकामा विशेष कोर्ष अध्ययनका लागि गएको समेत उनले सुनाए। ‘सन् १९९८ मा म अमेरिकामा बालबालिकाको मुटरोगका विषयमा नै पढ्न भनेर गएको हुँ। त्यसैले यो मेरो अहिलेको रुचि मात्र होइन।’
उनका अनुसार बाल स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले समुदायस्तरमा आधारित रोकथामका कार्यक्रमहरु निकै राम्रो गरेको छ। तर उपचारात्मक सेवातर्फ भने धेरै काम गर्न बाँकी छ। ‘बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रोकथामको तहमा राम्रै काम भएका छन्। तर द्वितीय र तृतीय तहका उपचार सेवामा हामी निकै कमजोर छौं। यही समस्यालाई समाधान गर्न हामी यो अभियानमा जुटेका हौं।’
अभियान सुरु गरेपछि डा कोइरालालाई धेरैले सरकारले गर्ने कामका लागि आफैं किन जान्ने भएको भनेर समेत प्रश्न गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘मैले ती मानिसलाई जवाफ दिने गरेको छु, मैले गंगालाल अस्पतालको प्रशासक हुँदा सुहाउने, शिक्षण अस्पताल जहाँ मुटुको सेवा थिएन, त्यसको प्रशासक हुँदा हाइहाई हुने, यो त स्वास्थ्यको विषय हो, म यो विषयलाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउने सोचमा छु।’
डा कोइरालाका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौंको हेपाली हाइटमा एक सय शय्याको अत्याधुनिक सुविधाको अस्पताल निर्माण हुने छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा भने हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ५० शय्याका अस्पताल बन्ने छन्।
‘यो विषय ठ्याक्कै सोचेजस्तो त नहोला, तर २ देखि ३ वर्षमा काठमाडौंको फेज १ को १०० बेडको अस्पताल तयार गर्ने र त्यसपछि हामी फेज २ मा प्रदेशमा जान्छौं । प्रदेशमा न्यूनतम ५० बेडका अस्पताल बन्छन्, स्रोत बढी जुटेको अवस्थामा बढी पनि होला। त्यहाँ पनि आइसियू, एनआइसियू, पिआइसियू सबै हुन्छन् । जनरल केयर सर्जिकल केयर सबै हुन्छ । एकदमै जटिल मल्टिस्पेसियालिटी चाहिं काठमाडौंमा फोकस गर्छौं।’
उनका अनुसार यो अभियान अन्तर्गत अस्पताल निर्माण गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने काम काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच)ले गर्ने छ। किओचको अध्यक्षमा डा कोइराला आफैं छन्।
अन्य सदस्यहरुमा दीपकराज सापकोटा, गोविन्दप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, डा ज्योतिन्द्र शर्मा, भुवन दाहाल र भवानी राणा रहेका छन्।
अस्पताल निर्माणका लागि किओचले लगानी संकलनका लागि आह्वान गर्ने छ। हालसम्म यसका लागि एक करोडभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ।
सात वटै प्रदेशमा अस्पताल निर्माणका लागि २ अर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
कस्तो मोडलमा अस्पताल चल्छ त? भन्ने जिज्ञासामा डा कोइराला भन्छन्, ‘यो संस्थाले गैरनाफामूलक रुपमा नै अस्पतालहरु चलाउने छ।’
उनका अनुसार यो परियोजना लगानीभन्दा पनि योगदानमा आधारित हो। ‘यो १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई अत्याधुनिक उपचार सेवा दिन खोलिने गैरनाफामूलक संस्था हो र यसका लाग हामीले तीन वटा मोडल छानेका छौं,’ उनले भने, ‘ठूला–ठूला स्टेकहोल्डरहरू पार्टनर, प्रमोटरका रूपमा यसमा जोडिन्छन्। प्रोफेसनल फन्ड रेजिङको सिद्धान्तमा नेमेङ अपरच्युनिटी भनिन्छ, हामीसँग यसका लागि फन्डरेजिङकै विज्ञहरू पनि जोडिने अवस्था छ। रनिङ मोडल भनेको रेभेन्यु जेनरेटकै सन्दर्भ हो। सरकारी स्किम, कर्पोरेट सोसल रेस्पोनिसबल अन्तर्गत संस्थाहरुले पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छन्।’
उनका अनुसार ठूला संस्था, बैंकहरू, टेलिकम्युनिकेसन र अन्य प्रतिष्ठित कर्पोरेट हाउसहरूले यो परियोजनामा सहयोग गर्न सक्ने छन्। स्वास्थ्यखबर डटकमबाट साभार
ट्याग्स: अस्पताल, डा भगवान कोइराला